Malta na-ekwupụta ihe mkpali ego ọhụrụ maka ahịa MICE
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa ozi Malta » Malta na-ekwupụta ihe mkpali ego ọhụrụ maka ahịa MICE
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Njem azụmahịa • investments • Akụkọ na -agbasa ozi Malta • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • nzukọ • News • Iwughachi • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Malta na-ekwupụta ihe mkpali ego ọhụrụ maka ahịa MICE - Cittadella
Malta, Oke Osimiri Mediterenian, aghọwo ihe mara mma MICE (Nzukọ, Ntinye, Mgbakọ, Ihe Omume) na-aga maka ahịa North America, yana ebe mmemme ya na-adọrọ adọrọ na mpụga, akụrụngwa magburu onwe ya na ụbọchị 300 nke anwụ na-acha kwa afọ.
Malta Tourism amalitela mmemme mkpali maka ndị na-ahazi MICE maka mmemme emere na Malta ma ọ bụ agwaetiti nwanne ya bụ Gozo.
Malta bụ ebe kachasị mma maka nzukọ na njem na-akpali akpali maka otu ndị dabere na United States na Canada.
Onyinye ego a ga-eme ka ihe omume ga-aga n'ihu mgbe ị na-aga n'ihu site na ịnye ndị bịara ọhụụ ọhụụ pụrụ iche, nke na-atọ ụtọ ma dịkwa mma.
Ihe kachasị mkpa maka ahịa ndị a bụ na Malta na-asụ Bekee, nwere ezigbo nnweta ikuku, yana enweghị visa chọrọ yana ihe niile dị ọnụ ala karịa mba ndị ọzọ dị na Europe. Ugbu a, Malta Tourism Authority (MTA) amalitela mmemme mkpalite maka ndị na-ahazi MICE maka ihe omume emere na Malta ma ọ bụ agwaetiti nwanne ya bụ Gozo na onyinye ruru € 150 (ihe ruru $ 160 USD gụnyere vat) maka ihe omume ọ bụla.
Dabere na Christophe Berger, Director, Mgbakọ Malta, “Njikọ Malta na ọdụ ụgbọ elu ndị isi Europe yana ọtụtụ nnukwu oghere dị n'èzí, usoro nchekwa nchekwa na netwọkụ ndị na-ebu ọrụ bụ ụfọdụ n'ime ihe kpatara Malta ji bụrụ ebe kachasị mma maka nzukọ na njem na-akpali akpali maka otu. nke dabeere na United States na Canada. Enwere m obi ike na MICE Business ọhụrụ anyị ga-abụ ihe mara mma nke ụlọ ọrụ na nzukọ ha na ihe nhazi ihe omume na mbọ ha iji bulie post Covid Event Planning site na ịnye ndị bịara ọhụụ ọhụụ ọhụụ pụrụ iche, nke na-atọ ụtọ ma dịkwa mma.
Gịnị kpatara Malta? Ebumnuche iri kachasị kpatara ndị na-ahazi MICE Họrọ Malta: